Hevi-baovao momba ny fahatsapana mihetsiketsika, fakan-tsary dia hanomboka hanoratra avy hatrany rehefa manara-maso ilay zavatra mihetsika ao amin'ny faritra detection
Loop recording misy, midika izany fa tsy namboarina ny nanoratra ny rakitra tranainy indrindra miaraka amin'ny vaovao indrindra rehefa feno ny karatra micro sd.
Batterie à batteries pour la continuité durable à la date à 5, ary miasa izy io mandritra ny famoahana loharano herinaratra ivelany.
Mialà kely ary mora manafina: Toa penina rehefa apetrakao ao am-paosinao, tsy misy mahatsikaritra na fakan-tsary io! Mifanentana tsara eo an-tananao, any am-paosinao, na anaty vatasarihana, kely kely izy io mba hiafina na aiza na aiza
HD LOW LEFT PERFORMANCE: Ny fakantsary fakan-tsary dia maka horonantsary mazava ao amin'ny 1080P, ankoatry ny horonantsary miloko hd ary mazava kokoa amin'ny antoandro, ity fakantsary pen pen ity dia mirakitra tsara ihany koa amin'ny tontolo iainana maivana, miaraka amin'ity haitao miavaka ity, azonao atao ny maka antsipiriany bebe kokoa amin'ny alina.
Kamera fandraisam-peo MINI Video & Audio
Fitehirizana eo an-toerana Tohano ny karatra Max 128GB MicroSD, manohana ny fijerena amin'ny aterineto.
Sponjy Supply DC 5V 1A
Battery fahaiza- 1200mAH
Video recording fotoana 5 ora
Fotoana firaketana feo 20 ora
Product habe 9.3cm * 2.8cm * 1.5cm
Fanaraha-maso lavitra ny telefaona; Connect namaky ny rindrina; tsy misy internet; mijery an-tserasera
SPY222 - Lahatsary horonantsary horonantsary miafina Mini